Ireo tanora atody mpitarika dia miresaka momba ny fotoana mety sy ny fanamby amin'ny ho avy - Vaomiera iraisam-pirenena momba ny atody
Ny programa IEC Young Egg Leaders Program dia mampivondrona ireo mpitarika ho avy mientanentana avy amin'ny orinasa atody manerana an'izao tontolo izao hanohanana ny fivoaran'ny asany. Ao amin'ny lahatsoratray farany amin'ity andiany ity, Michael Griffiths an'ny YEL amin'izao fotoana izao, mpitantana ny fampandrosoana ny vokatra vaovao ao amin'ny Oakland Farm Eggs, UK, ary Opeyemi Agbato, talen'ny Executive Health Animal and Husbandry ao Animal Care, Nizeria, dia nizara ny fomba fijerin'izy ireo ny fanamby, fandrahonana ary fotoana mety atrehan'ny indostrian'ny atody.
Inona no fotoana lehibe indrindra mbola tsy voarara ho an'ny indostrian'ny atody?
Michael: Mino aho fa be dia be ny fotoana mbola tsy voarara ho an'ny indostria misy antsika. Eo am-pandehanana sy ny vokatra mahamora dia nanatri-maso fitomboana lehibe tato anatin'ny taona vitsivitsy satria mitady fahafaha-manao amin'ny andavan'andro ny olona. Na dia hisy fiatraikany aza izany COVID ao anatin'ny fotoana fohy, satria vitsy ny olona mankany amin'ny birao, dia nahatonga ny olona hanombatombana indray ny fahasalamany, ary mino aho fa misy fotoana lehibe ahazoana atody sy vokatra atody hanome loharano mahasalama sy mety. ny sakafo mahavelona.
Opeyemi: Ny fikarohana vaovao dia manohy mampiseho ny antony tokony hankafizana ny atody ao anatin'ny sakafo ara-pahasalamana. Mino aho fa misy fotoana bebe kokoa ahafahana manao izany amin'ny sehatra isam-paritra, izay ahafahan'ny mpamokatra mampiseho ny tombony azo avy amin'ny atody mifototra amin'ny mponina sy demografika eo an-toerana.
Inona avy ireo olana lehibe amin'ny raharaha ao an-tsainao?
Michael: Iray amin'ireo olana lehibe momba ny orinasa ao an-tsaiko amin'izao fotoana izao ny fiantraikan'ny firosoana amin'ny famokarana malalaka any UK sy ny ho avin'ny zanatany manankarena. Ireo fanapaha-kevitra ireo dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny orinasa mpamokatra atody any Angletera, ary mino aho fa zava-dehibe ny ahafahantsika mifampiresaka malalaka sy marina momba ny fiantraikan'ny tontolo iainana sy ny fiahiahiana ny rafitra rehetra hahafahan'ny mpanjifa manana safidy hanapa-kevitra. safidy voafaritra tsara.
Opeyemi: Ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra ao an-tsaiko dia ny fihazonantsika ny varotra atody mandavantaona mba hialana amin'ny glutage lehibe misy fiatraikany amin'ny vidiny. Mino aho fa zava-dehibe ho antsika ny mijery fotoana vaovao hampihenana ny fiovaovan'ny toetr'andro, na amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana, fanondranana na teknika fitehirizana mety misy, toy ny hatsiaka, izay azo ampiasaina hanohanana ny vidiny mirindra kokoa mandritra ny taona.
Inona avy ireo fandrahonana lehibe ho an'ny indostrian'ny atody?
Michael: Ny aretina avian dia mijanona ho fandrahonana lehibe ho an'ny indostria, indrindra fa ny Avian Influenza. Rehefa manohy miatrika fanerena any Angletera isika mba hiala amin'ny famokarana zanatany manankarena mankamin'ny rafitra malalaka, dia vao mainka lehibe aza io fandrahonana io, izay matetika no tsy raharahiana. Ny fahasalaman'ny voronay dia mijanona ho laharam-pahamehana ho an'ireo mpamokatra atody erak'izao tontolo izao, ary mino aho fa zava-dehibe ny fiheverana toy ny loza mitatao amin'ny aretina raha toa ka misy fiantraikany eo amin'ny rafitry ny famokarana ny fanapahan-kevitra tapaka.
Opeyemi: Fandrahonana lehibe ny tsy fandriam-pahasalaman'ny fidirana amin'ny fidirana sy ny tsy fisian-tsakafo. Ny vokatra ambany dia ambany amin'ny voa, toy ny katsaka sy ny tsaramaso, raha oharina amin'ny filan'ny indostria, lafo tokoa ny vidin'ny famokarana izay afindra amin'ny vidin'ny atody. Izany dia vokatry ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ireo faritra fambolena any ambanivohitra izay nanakivy ny fampiasam-bola amin'ny mekanisialy sy ny fomba fambolena mahomby hafa izay afaka manatsara ny famokarana. Ireo tanimboly dia tsy dia miasa firy mandritra ny vanim-potoanan'ny fambolena, ka miteraka tsy fahampiana. Loza iray hafa manimba ny indostria ny fiheverana diso ny anjara asan'ny atody amin'ny fahasalamantsika. Ny fanambarana ara-tantara momba ny kolesterola dia mitohy miely any amin'ny faritra sasany, na dia eo aza ny porofo ara-tsiansa vao haingana izay mampiseho fa ny atody dia tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny tahan'ny kolesterola. Mino aho amin'ny maha-indostria antsika rehetra dia manana andraikitra hanampy amin'ny fampiroboroboana ny sandan'ny atody, ary ny fampisehoana ny atody avo lenta avoakan'ny atody mba hanampy azy io.